Wasiirka Gaashaandhiga Somalia oo Baydhabo lagu soo Dhaweeyay – Radio Daljir
Oktoobar 11, 2015 5:05 b 0
Axad, Oktoobar 11, 2015 (Daljir) — Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini iyo wafti uu hogaaminayey oo ay kamid ahaayeen Wasiiru dowlaha wasaaradda ayaa tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Koonfur galbeed iyo shacabka maagaalada Baydhabo ayaa halkaasi kusoo dhaweeeyey.
Wasiiru dowlaha Gaashaandhiga Maxamed Cali oo warbaahinta uga warbixiyey safarka ay ku tageen Baydhabo ayaa sheegay in ujeedka ay Baydhabo u yimaadeen tahay sidii wada tashi ugala samayn lahaayeen Isku dhafka ciidamda maamulka Koonfur galbeed.
“Ujeedkeena ugu weyn ee maanta halkan aanu u soo gaarnay waa dhismaha ciidan Qaran oo leh karti iyo hufnaan sidii loo heli lahaa, socdaalkan waxaa igu weheliya xubno ka tirsan Guddiga Isku dhafka Ciidanka iyo madax kale oo deegaankan ka soo jeeda. Waxaan wadatashi la yeelan doonaa dhinacyada ay arrintani quseyso oo ugu horeeyo hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed”.
Dowladda Fadaraalka ayaa wada qorshe layskugu dhafayo ciidamada,si loo dhiso ciidamo Qaran,dhawaan waxaa Kismaayo laga dhisay ciidamo isku dhafan kuwaas oo la sheegay inay qayb ka noqon doonaan ciidamda Qaran ee la dhisayo,horay ayey dowladda Fadaraalka iyo maamul goboleedyadu ugu heshiiyeen in la dhiso ciidan Qaran oo badala AMISOM.